KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Sɛ yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ a, yenya so mfaso pii. Ɛma yenya akwahosan pa, ahonim pa, ne akomatɔyam. Ne saa nti, ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ daa.
Sɛ yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ a, sɛn na ɛboa yɛn?
NEA NNURUYƐFO KA
Nhoma bi ka sɛ, “Sɛ yɛpɛ sɛ yɛn ani gye paa a, gye sɛ yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ. Sɛ nkurɔfo kyerɛ nneɛma ho anisɔ a, ɛboa ma wonya adwempa, ɛma wɔn ani gye, wonya akwahosan pa, ɛma wotumi gyina ɔhaw ano, na ɛma wɔne afoforo ntam yɛ kama.”—Harvard Mental Health Letter.
Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnkyerɛ nneɛma ho anisɔ. Ɔsomafo Paulo ankasa yɛɛ nhwɛso wɔ saa suban yi ho, na ɔkyerɛwee sɛ “monkyerɛ nneɛma ho anisɔ.” Ɛho nhwɛso ni. Ɔdaa “Onyankopɔn ase daa” sɛ nkurɔfo tiee asɛmpa no wɔ aso pa mu. (Kolosefo 3:15; 1 Tesalonikafo 2:13) Ɛtɔ da a, ɛnyɛ meda ase a yɛbɛka kɛkɛ no na ɛbɛma yɛn ani agye, mmom ɛsɛ sɛ yɛyɛ nnipa a yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ ankasa. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛbɔ yɛn ho ban fi pɛsɛmenkominya, anibere, ne adwemmɔne ho. Sɛ yɛda suban a ɛte saa adi a, ɛbɛpam nkurɔfo afi yɛn nkyɛn, na yɛn ani rennye.
Yɛn Bɔfo no ayɛ wei ho nhwɛso fɛfɛɛfɛ ama yɛn. Ɛwom sɛ yɛyɛ nnipa a yɛtɔ sin deɛ, nanso biribiara a yɛyɛ ma no no, ɔkyerɛ ho anisɔ! Hebrifo 6:10 ka sɛ: “Onyankopɔn nyɛ nea ɔnteɛ sɛ ne werɛ befi mo adwuma ne ɔdɔ a modaa no adi wɔ ne din ho.” Ɛyɛ nokwasɛm sɛ, yɛn Bɔfo no bu no sɛ ɛnteɛ anaa ɛnyɛ fɛ sɛ obebu n’ani agu biribiara a yɛyɛ ma no no so.
“Mo ani nnye bere nyinaa. Biribiara mu momfa aseda mma.”—1 Tesalonikafo 5:16, 18.
Ɔkwan bɛn so na sɛ yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ a, ɛma yɛne afoforo ntam yɛ kama?
DƐN NA WOAHU A ƐKYERƐ SAA?
Sɛ nkurɔfo kyɛ yɛn adeɛ, wɔka asɛmdɛ kyerɛ yɛn, anaa wɔyɛ yɛn mmoa bi, na sɛ yeyi yɛn yam kyerɛ ho anisɔ a, ɛma wɔte nka sɛ wɔsom bo na wɔn so wɔ mfaso. Sɛ obi a wunnim no mpo yɛ biribi ma wo, sɛ ebia, obue ɔpon ma wo, na woda no ase a, n’ani gye paa.
Yesu Kristo kaa sɛ, “Monkɔ so mma na nkurɔfo ama mo. Susukora pa a wɔamia so, awosow no ma abu so na wɔde begu mo ntama mu.” (Luka 6:38) Ma yɛnhwɛ Rose asɛm yi. Ɔyɛ abaayewa a ɔyɛ mum wɔ Vanuatu, supɔw bi a ɛwɔ South Pacific.
Ná Rose kɔ Kristofo nhyiam a Yehowa Adansefo yɛ no bi nanso na onnya so mfaso kɛse efisɛ na ɔnte mum kasa, na na obiara nso nni asafo no mu a ɔte mum kasa. Bere a awarefo bi a wɔte mum kasa baa asafo no mu na wohuu tebea no, wɔyɛɛ nhyehyɛe kyerɛɛ nkurɔfo mum kasa. Rose ani sɔɔ nea awarefo no yɛe no paa, na ɔkaa sɛ: “M’ani agye sɛ manya nnamfo pii a wɔdɔ me saa.” Sɛnea Rose kyerɛɛ nneɛma ho anisɔ ne sɛnea seesei otumi de ne ho hyɛ Kristofo nhyiam mu no ma awarefo no koma tɔ wɔn yam paa. Rose nso ani agye paa sɛ nkurɔfo rebɔ mmɔden sɛ wobesua mum kasa na ama wɔatumi ne no akasa.—Asomafo Nnwuma 20:35.
‘Nea ɔde aseda bɔ afɔre no na ɔbɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam.’—Dwom 50:23.
Wobɛyɛ dɛn akyerɛ nneɛma ho anisɔ?
Nneɛma a yɛn ani gye ho no na yɛtaa dwinnwen ho. Dawid ka nnipa a wɔkyerɛw Bible no ho. Ɔbɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: “Midwinnwen wo nnwuma nyinaa ho; Metena ase susuw wo nsa ano adwuma ho.” (Dwom 145:5) Anokwa ná Dawid nyɛ obi a ɔma nneɛma biara twetwe n’adwene kɛkɛ, na na osusuw nneɛma ho kɔ akyiri. Nneɛma ho anisɔ a na ɔwɔ no, amma kwa. Ɛyɛ Onyankopɔn akwan a ɔtoo ne bo ase susuw ho ne kwa nna nyinaa no na ɛmaa ɔyɛɛ saa.—Dwom 71:5, 17.
Bible no de afotu pa yi ma yɛn nyinaa: ‘Biribiara a ɛyɛ nokware, biribiara a ɛyɛ fɛ, biribiara a wɔka ho asɛm pa, ɔbra pa biara a ɛwɔ hɔ ne biribiara a ɛsɛ ayeyi no—monkɔ so nsusuw saa nneɛma yi ho.’ (Filipifo 4:8) Asɛm “monkɔ so nsusuw” ho no ma yehu sɛ ehia sɛ daa yegye bere dwinnwen nneɛma ho kɔ akyiri. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛbɛboa yɛn ma yɛakyerɛ nneɛma ho anisɔ.
“Ntease na medwen ho me koma mu.”—Dwom 49:3.